Branch Manager for Early Dawn Microfinance | Job in Myanmar
Jobs in Myanmar, jobs in Yangon - Sales & Business Development jobs - Branch Manager
• Responsible for all microfinance operations an growth at the branch office, to ensure that branch office reach the set targets and financial sufficiency
• ဌာနခွဲများ၏ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတိုးတက်လာစေရန်၊ဌာနခွဲများ၏ချမှတ်ထားသောရည်မှန်းချက် ပြည့်မီရန်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးလုံလောက်မှုရှိစေရန် အတွက်သေချာစွာလုပ်ဆောင်ရန်။
• Recruit and maintain number of clients and outstanding portfolio amount asamature branch as targeted at Dawn and monitor continuously responsible branch’s targets.
• အဖွဲ့ဝင်သစ်များရှာဖွေဖွဲ့စည်းခြင်း၊ချေးငွေလက်ကျန်ပမာဏများတိုးမြင့်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်မိမိဌာနခွဲ၏ ရည်မှန်း ချက်ပြည့်မီအောင်စဉ်ဆက်မပြတ်အကဲဖြတ်၍ဆောင်ရွက်ရန်။
• Management of all staff, properties, portfolio and clients
• ချေးငွေလက်ကျန်၊ ၀န်ထမ်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များအားင်္စီမံခန့်ခွဲရန်။
• Recruit, train, supervise, and recommend for termination if needed.
• ၀န်ထမ်းများအားခန့်ထားခြင်း၊စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊သင်တန်းပေးခြင်းနှင့်တာဝန်မှရပ်ဆဲခြင်းများလိုအပ်အပ်လျှင်ဆောင် ရွက်ရန်။
• Hold 15 minutes daily and discuss daily plan with all Loan Officers and Finance Assistant
• နေ့ စဉ် ( ၁၅ ) မိနစ် meeting ပြုလုပ်ပြီး တစ်နေ့ တာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု များအတွက် Loan Officers များ Finance Assistant များနှင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်။
• Set quarterly and annual performance targets and conduct performance evaluations for loan officers and Assistant Branch Manager along with senior Management as per established guidelines.
• ၃လပတ်နှင့်တစ်နှစ်လုပ်ဆောင်ရန်ရည်မှန်းချက်များထားရှိပြီးချေးငွေအရာရှိများ၏လုပ်ဆောင်ချက်များအားအကဲ ဖြတ်ခြင်းများပြုလုပ်ပေးရန်နှင့်စီမံအုပ်ချုပ်သူများ၏လမ်းညွှန်မှုနှင့်ဆောင်ရွက်ရန်။
• Set targets for the branch, meet local authorities, organize, coordinate and conduct mass orientation meeting in new wards/village tracks to promote the program in order to develop and implement expansion strategy.
• မိမိဌာနခွဲ ၏ ရည်မှန်းချက်များချမှတ်ထားရန်၊ မိမိဌာနခွဲ ၏ လုပ်ငန်းများပိုမို တိုးတက်ရန် အတွက် ရပ်ကွက်သစ်၊ ကျေးရွာသစ်များသို့သွားရောက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုး များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး လုပ်ငန်းစဉ် မိတ်ဆက်ဆွေးနွေး ပွဲများ ပြုလုပ်ပြီးနယ်မြေသစ်များတိုးချဲ့ရှာဖွေရန်၊
• Lead Assistant Branch Manager and Loan Officers in recruiting new clients in visiting and screening them; identifying collection points, adhere to loan appraisal processes; approve all loans disbursed in branch.
• လက်ထောက်ဌာနခွဲမန်နေဂျာနှင့် ချေးငွေအရာရှိတို့အားဦးဆောင်ပြီး အဖွဲ့ဝင်သစ်များအား စိစစ်ရွေးချယ်ပေးခြင်း၊ စုရပ်များအားခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ဌာနခွဲအတွင်းချေးငွေအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုခွင့်ပြုပေးရန်၊ချေးငွေ အဆိုပြုလွာနှင့် ချေးငွေစာအုပ်များကိုစစ်ဆေး အတည်ပြုပေးရန်။
• Ensure full repayment by clients and assist Loan Officers in handling delinquent loans and clients handle zero tolerance for delinquency and report infractions immediately
• Conduct monitoring visits to collection points as planned at least once to each Loan officer per week to verify client numbers and cross check loan officer’s registers; report on same
• Supervise loan officers in order to follow all policies and procedures in place including new product and new policies changes
• ချေးငွေအရာရှိများအားချမှတ်ထားသောစည်ကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားလိုက်နာစေရန် ကြီးကြပ်ဆောင် ရွက်ပေးခြင်း၊အစားထိုးပြောင်းလဲချမှတ်သောချေးငွေအသစ်များစည်းကမ်းများလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ကြီးကြပ်
• Supervise and check field expenses of Loan Officers, whether collection process is proper or not, filling application form at client’s business/house or not.
• ချေးငွေအရာရှိများတင်သည့် Field Expense များကိုစစ်ဆေးကြီးကြပ်ရန် ၊ Collection Process မှန် မမှန် ကြည့်ရန် ၊ Application From များကို Clients နေအိမ် များတွင်သေချာစွာဖြည့် မဖြည့် စစ်ဆေးရန် ။
• Check and approve cash Requests of Branch to Head Office.
• မိမိဌာနခွဲအတွက် လိုအပ်သောငွေတောင်းခံခြင်းများ ကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းများပြုလုပ်ရန်။
• Arrange and supervise disbursement and savings withdrawal every day.
• ချေးငွေထုတ်ချေးပေး ရန်နှင့် စုငွေ ပြန်ထုတ်ပေးခြင်းများကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန်။
• Approve all cash receipts and payments of Branch
• Always monitor and control client retention rate of Branch
• အဖွဲ့ဝင်များနှုတ်ထွက်မှုနှုန်းထားများအပေါ်အမြဲတန်းလေ့လာစိစစ် ထိန်းသိမ်းရန်။
• Check, verify and approve all of the reports developed from Kredits such as CO2, CO5, P11, collection voucher and etc.
• Kredits မှအစီရင်ခံများ (CO2၊ CO5 ၊ P11 ၊ Collection Voucher) အားစစ်ဆေးခြင်း၊ စိစစ်းအတည် ပြုပေးခြင်း များပြုလုပ်ပေးရန်။
• Assists Operations, Finance, HR and any other operational issue as needed.
• Operations, Finance, HR နှင့်အခြားဌာနများမှ လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များရှိပါကကူညီပေးရန်။
• Must visit to borrower’s house/business both new and renew loans.
• ငွေချေးသူများ၏ အိမ် (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ကို မဖြစ်မနေ သွားရောက်စစ်ဆေးရန်။
• Perform any duty assigned by Regional Manager as require basic.
• Prepare and approve all weekly, monthly, quarterly and annual reports and budgets for the branch.
• Check, verify and send FRD reports monthly.
• FRD အစီရင်ခံစာများအားစစ်ဆေးအတည်ပြုပေးပို့ရန်
• Report immediately any delinquency, cash deficiency and/or any other problems
• ချေးငွေပြန်ဆပ်မှုနောက်ကျခြင်း၊ ငွေကြေးမလုံလောက်ခြင်းနှင့်အခြားသောပြသနာများရှိ်ပါကချက်ခြင်းသတင်းပို့ရန်
• Complete regular internal reports fully and on time including monthly financial, outreach and portfolio reports
• လစဉ်ပေးပို့ရမည့်ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာများ၊တိုးတက်မှုရောက်ရှ်ိမှုအခြေအနေနှင့်ချေးငွေလက်ကျန်ရှိမှုအစီရင်ခံ စာများအားအချိန်မီပေးပို့ရန်
• Complete all periodic donor or government reports
• Government အစီရင်ခံစာများကိုရံဖန်ရံခါ(အခါအားလျှော်စွာ)ပေးပို့ရန်။
• Assures compliance with all internal policies and procedures
• အဖွဲ့အစည်းအတွင်းချမှတ်ထားသောမူဝါဒ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားလိုက်နာရန်
• Instructs staff on same and reports immediately any infractions to Operations and Risk Managers
• Assures compliance with all local and national laws
• Prepare and cooperate fully with all internal and external audits
• internal and external audits များအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။
•	Demonstrated computer skills in Microsoft Office Suite required
•	Management experience of at least one year preferred
•	Excellent interpersonal, budgeting, financial, supervision, planning and monitoring skills required
•	Must be able to work independently and make decisions
•	Verbal and written skills in Myanmar language and English
•	Understanding of geographic area desirable
•	Ability to travel throughout Myanmar and relocate as necessary.